SINOPED oomatshini bobuchwephesha be-Pharma Abavelisi
Inkampani iye yaphucula izixhobo ezikhethekileyo zokulungisa oomatshini bamayeza.
Umatshini wokulungiselela izinto ezikrwada
Umatshini wokuzalisa i-Hard&softgel Capsule
Umtshini weMaski yobuso
Kunye nezixhobo processing phambili esikhethekileyo oomatshini zamachiza, idityaniswe iiteknoloji ezintsha kunye neenkqubo kwimarike, sizabalazela elihle.
Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co, Ltd. ngoku lenza R&D kunye nokuveliswa centrifuges e Liaoyang Pharmaceutical Machinery Factory, sokuqala karhulumente-oomatshini lemveliso zamachiza mveliso eNew China. Thina namava anzulu, egxininisa Pharmacy Izixhobo iminyaka engama-50, ekhonza amashumi phantse amawaka abathengi. Ngezixhobo processing advanced sungula ku oomatshini zamachiza, idityaniswe iiteknoloji ezintsha kunye neenkqubo kwimarike, sizabalazela elihle. Neqela ngobuchule amakhulu abantu, umfuziselo ulawulo ogqibeleleyo yenza iqela leengcali ngakumbi. Le R mode Ukuhlanganisa&D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo kwenza nje kuphela abathengi enganeliswa, koko kwakhona libenza Ungakhathazeki-free.
FLG Bed Fluid Kwavingcelwa Granulation nokuhlanganiswa Production Line
FLG Bed Fluid Kwavingcelwa Granulation nokuhlanganiswa Production LineIinkcukacha intshayelelo nceda bhekisa ku elandelayohttps://www.alibaba.com/product-detail/China-Pharmaceutical-Fluid-bed-continuous-fluid_60586863855.html?spm=a2747.manage.0.0.149c71d27MPrngUbuhle bokuba GEA Pharmaceutical nkqo Continuous kusekelwe Bed wokomisa Fluid ekubeni evenness kunye ukwenzeka nomgangatho wemveliso, nto leyo ibonisa ukulinganisela ofanelekileyo phakathi kakuhle imveliso kunye nomgangatho imveliso. Xa inkqubo fluidization, izinto ndiyihlanganise ndiyidadise phezulu emoyeni, kunye komhlaba wadibana ngokupheleleyo emoyeni eshushu, kwaye izinto ngoko ke ngokulinganayo eated yaye ifikelela kwindawo efanelekileyo kwindawo zonaniso ubushushu ke ukuba ukusebenza eliphezulu. Configurated kunye nenkqubo efanelekileyo ukutshiza ngokusebenzisa engaphezulu ekuphuculeni noshowo, ebhedini ulwelo ke uba iziko processing multi-nenjongo nemisebenzi emanyeneyo omiswe, granulating, umxube ukutyabeka, kunye nomgubo imveliso dressing.Final ngokuqhelekileyo nangoko enyibilikayo granule.
I-ZPW Series Tablet Cinezela luyilo oluthile lweThebhulethi ye-Effrvescent, cofa igranule kwithebhulethi esebenzayo ngokuthe ngqo. I-Screw type punch, emva kokuCima&Ukucutshungulwa okukhethekileyo, kunokuphepha iPowder Stick kwiiPunches ngokufanelekileyo.Ineziphumo ezingcono zezinto ezibonakalayo yi-viscosity, ukuhamba kakubi, kulula ukufuma, ukufumana indlela ekhethekileyo yokubumba, esetyenziswa ngokubanzi kwishishini lekhemesti.
I-NJP 800 yoMshini wokuzalisa iCapsule
Umatshini wokuzalisa i-capsule yintshukumo ephazamisayo kunye nohlobo lweplate yomngxuma yokuzalisa izixhobo zokuzalisa i-capsule ngokuzenzekelayo. Yamkela uyilo lokuphucula oludibeneyo kunye neempawu zonyango lwaseTshayina kunye neemfuno ze-GMP, ineempawu zendlela yokudibanisa, umthamo omncinci, ingxolo ephantsi, i-dosage yokuzalisa ngokuchanekileyo, i-multi-function, iqhuba ngokuzinzileyo njl. : Ukutya kwe-capsule, ukwahlula i-capsule, ukuzaliswa kwe-powder, ukugatywa kwe-capsule, ukuvala i-capsule, ukukhutshwa kwe-capsule egqityiweyo kunye nokucoca imodyuli njl. indlela yokunyusa ekulula ukuyicoca, igcina iindleko kunye nabasebenzi kwishishini elidinga umthamo wokuvelisa
Customized Gel Soft Encapsulation Machine abavelisi abavela eTshayina | Sinoped
I-HSR-180H / 200H / 250H / 300H umgca wokuvelisa i-softgel yinkqubo yokuvelisa ubuninzi kunye nabathengi abafanelekileyo abaneemfuno ezahlukeneyo zamandla.Isixhobo sinesakhiwo esincinci, ukusebenza okulula, ukugcinwa okulula, ukusebenza okuzinzileyo, ukuveliswa okuphezulu kunye nokusetyenziswa okuphantsi. Ilungele ukutya, amayeza, izithambiso, ibhola yepeyinti kunye neshishini lemichiza.
Blister zopakisho umatshini cartoon
JDZ-260 ngokuqhubekayo-type-high speed umatshini cartonning ithethe yenzelwe inkampani yethu, kwaye uyakufezekisa umgangatho GMP. Kukho iinkalo kahle eliphezulu, iimpawu ezizinzileyo kunye nesikhundla ephakamileyo, njl ubugcisa abaninzi, kuquka yokukhwabusha oluzenzekelayo phetshana ngayo& yokugqithisa, iibhokisi ukwakha kunye nesithuba ukutyhala iyunithi, njl ukuhlangabezana European& Melika. Kunye ukubonakala icocekile kwaye isakhiwo post ukutyhala oqhubekayo, kuba lula ukusebenza nokulondoloza. Nge ujikelezo-4-luhlu kabini-langa-wheel-mali lwangaphandle-ngokwenzekayo, iibhokisi iya kuvulwa, kwaye kukho kabini izixhobo pre-ukwakha, ngoko liqinisekisa ke ukuba bhokisi nga inkxaso ngokupheleleyo.Kulo matshini, i / ulawulo mechanical enombala / zombane / womoya zinxulunyaniswe kwenye, kwaye xa into edibene namanye oomatshini afane, ukuba umgca ivale epheleleyo.
I-Automatic Bag Liquid Filling Machine Factory yokuPakisha i-SINOPED
Umatshini wokuPakisha uLwalo oluzenzekelayozibandakanya impompo yokuzalisa ulwelo, ukwenza ingxowa, ukutywina kunye nomhla wokushicilelaukupakisha isantya 30 ukuba 50bags / minIxesha lokuhambisa 25daysInombolo yomzekelo 320, 420, 520, 620 kunye ne-720Ibhegi ububanzi 15cm ukuya 35cm
I-SGGZ-8 Iintloko ezi-2 ze-Capping Filling Mashine Oral Liquid Bottle, i-Metal Plastic Screw Cap yokuzaliswa kunye noMatshini wokuThengisa
* Olu luhlu lokuzalisa i-capping (roll) umatshini osetyenziswa kakhulu kwi-20/30/50/60/100ml ibhotile yeglasi, intsimbi yentsimbi yokuzalisa i-cap, yongeza i-cap, i-capping (roll);* Olu luhlu lwenkqubo yokuzalisa umatshini kunye ne-capping(roll) inkqubo ifakwe ngokungagungqiyo nangokucacileyo, igcwalisa ukuchaneka okuphezulu, akukho kuthontsiza;* Ulwakhiwo lwe-Capping(roll) sisakhiwo sepatent yenkampani yethuUbuchwephesha beSGGZ-8 2 Heads Capping Filling Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic Screw Cap Filling kunye nabavelisi beCapping Machine xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineenzuzo ezibalaseleyo ezingenakuthelekiswa nanto malunga nokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njl., kwaye uyonwabela idumela elihle kwimarike.I-Sinoped ishwankathela iziphene zeemveliso ezidlulileyo, kwaye ngokuqhubekayo iphucula. Iinkcukacha ze-Professional SGGZ-8 2 Heads Capping Filling Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic Screw Cap Filling kunye nabavelisi beCapping Machine bangenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.ture, capping(roll) smooth Ukuqinisekisa ngokufanelekileyo umgangatho wokupakishwa.
Elungiselelweyo Room ezicocekileyo 1 abenzi Ukusuka China
Le igumbi ecocekileyo zokwakha inkonzo epheleleyo phantsi isicelo GMP. project Turnkey. A Cleanroom okanye Igumbi ohlambulukileyo iimeko, ezisetyenziswa mveliso okanye uphando lwezenzululwazi, ukuba unalo inqanaba elisezantsi zingcolisi zokusingqongileyo ezifana nothuli, iintsholongwane emoyeni, kutshizwe amasuntswana kunye umphunga imichiza. ngokucokisekileyo ngakumbi, a cleanroom na inqanaba ezilawulwa contaimination ukuba ixelwa ngokwenani amasuntswana cubic metre kwindawo ubungakanani yamasuntswana ethile. Ukunika umbono, umoya ngaphandle okukufutshane kwindawo eqhelekileyo ezidolophini iqulethe amasuntswana 35.000.000 cubic metre kwi 0.5um ubungakanani uluhlu kwaye zinkulu, ihambelana cleanroom ISO9, lo gama i-cleanroom ISO1 ivumela akukho amasuntswana kuloo uluhlu ubukhulu ne-12 kuphela amasuntswana we-cubic metre 0.3um ezincinane
Kwiminyaka edlulileyo, siye wenza enkulu ngenxa elihle kwindlela ohlawula yethu nenkonzo. Siye saseka ubudlelwane zoshishino lwexesha elide kunye nabathengi ezininzi kunye nabanye abathengi bethu phesheya Ndimmisile ukuba abe arhente yazo ukuthenga iimveliso zoxubo mayeza& Iinkampani zamachiza lemveliso in China. iimveliso zethu lemveliso amayeza lithunyelwa kwiindawo ezininzi amazwe, afana Korea, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Vietnam, Iran, eJapan, Denmark, Romania, Bulgaria, eRashiya, South Africa, Nigeria, i-USA, Australia, Canada, Argentina kunye Chile. Ngaphandle oomatshini kunye nezixhobo, nathi kubonelela kwizikhundla zemveliso, jikani iiprojekthi eziphambili ukwazi.
Iprojekthi yeTurnkey yeCapsule kunye neThebhulethi, ibandakanya iGumbi elicocekileyo, ukuNyangwa kwamanzi kunye nokuVeliswa kwamandlasiyenzile ngo-2020 kwaye sagqiba ngo-2021I-SINOPED ibonelela ngoYilo, ukubonelela ngeZixhobo (i-tablet press, ukuzaliswa kwe-capsule, ukupakisha i-blister, ukuxuba, i-Fluid bed granualting, unyango lwamanzi, iGumbi elicocekileyo njl njl)Ngoku umzi-mveliso uphantsi kwemveliso njengesiqhelowamkelekile ukuba undwendwele !
Umatshini wokuzalisa iCapsule eVietnam
Izixhobo zingasetyenziselwa ukuncamathelisa kunye nokutywina ii-capsules ezinzima ezizaliswe ngamanzi, i-particle kunye ne-powder, njl., ukwenzela ukuba iimveliso zihlale zitywinwe kwinkqubo yokupakisha, ukugcinwa kunye nokuthutha.Inokuthintela ngokufanelekileyo ukuguquguquka kwe-volatiledrugs, ukwandisa Ubomi beshelufa yamachiza, ukuze kuphuculwe uzinzo lwe-capsules kunye nokhuseleko lweziyobisi.Ngaxeshanye, ikwayisiqinisekiso somgangatho weemveliso ezikumgangatho ophezulu kumashishini axuba amayeza kunye neemveliso zempilo zamashishini.
Umgca weMveliso yeThebhulethi ye-EU yokutya
Eli ligumbi elicocekileyo lokwakhiwa kwenkonzo epheleleyo phantsi kwesicelo se-GMP. Iprojekthi yaseTurkey.Igumbi elicocekileyo okanye igumbi elicocekileyo yindawo, esetyenziswa ngokuqhelekileyo kwimveliso okanye uphando lwezenzululwazi, olunezinga eliphantsi lezinto ezingcolisa indalo ezifana nothuli, i-microbes emoyeni, amasuntswana e-aerosol kunye nomphunga wamachiza. Ngokuchanekileyo, igumbi lokucoca linomgangatho olawulwayo wokungcola ochazwe ngamanani eengqungquthela kwi-cubic meter kwi-particle echaziweyo. Ukunika imbono, umoya we-ambient ngaphandle kwimekobume yedolophu eqhelekileyo iqulathe amasuntswana angama-35,000,000 kwi-cubic meter nganye kuluhlu lobungakanani be-0.5um nangaphezulu ngobubanzi, ngokuhambelana ne-ISO9 yokucoceka, ngelixa igumbi elicocekileyo le-ISO1 lingavumeli amasuntswana kolo luhlu lobungakanani kwaye kuphela. Amasuntswana ali-12 kwi-cubic meter nganye ye-0.3um nangaphantsi.
I-advanteji ye-FL Food Grade yeStevia Sugar Production Line iteknoloji ixhomekeke ekugcineni ukulingana kunye nokuphindaphinda komgangatho wemveliso, okubonisa ulungelelwaniso olufanelekileyo phakathi kobuchule bemveliso kunye nomgangatho wemveliso. Kwinkqubo ye-fluidization, izinto ezidadayo zidada ngaphezulu komoya, kunye nomphezulu wokudibana ngokupheleleyo nomoya oshushu, kwaye izinto ke ngoko zityiwa ngokulinganayo kwaye zifikelele kwindawo efanelekileyo yokutshintshiselana kobushushu ukuze zibe nokusebenza okuphezulu. Ilungelelaniswe nenkqubo yokutshiza eyiyo kunye nokuphuculwa kwesakhiwo esongezelelweyo, ibhedi yolwelo emva koko iba yindawo yokusebenzela enenjongo ezininzi kwimisebenzi edibeneyo yokomisa, igranulating, i-coating yesisombululo, kunye ne-powder dressing.Imveliso yokugqibela idla ngokuxutywa ngokukhawuleza.
Pharma imishini nomakhi -Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co, Ltd
Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co, Ltd. Ingaba ishishini imveliso enkulu-scale specialising in R&D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo oomatshini lokuvelisa zamachiza, kakhulu zobungcaliPharma oomatshini nomakhi eTshayina, Kuyinto iintlobo centrifuges, izincedisi ezahlukeneyo icentrifuge, centrifuges tube, kunye centrifuges disk. A Inkampani lemveliso zamachiza ngokukodwa kwimveliso nokuhoywa iimveliso ezifana centrifuges enemilenze emithathu. Le nkampani iye iinjineli ezininzi abaphezulu kunye namagcisa lobungcali, kwaye linenkqubo yolawulo lwexabiso epheleleyo nezesayensi. Izixhobo bokwenziwa lidibana imigangatho yesizwe kunye noshishino. Lixhotyiswe kwinkonzo yobungcali emva-intengiso, ufakelo imveliso ngokupheleleyo kwakunye ekucokiseni, kunye noqeqesho lobuchule ukunika abasebenzisi abane izixhobo zobungcali ngeenkonzo zobungcali.
Qhagamshelana neeNtengiso kuXXXXX